Guddoomiyihii deegaanka Jiidda Janaale oo kooxo hubeysan Gurigiisa ku dileen – STAR FM SOMALIA
Guddoomiyihii deegaanka Jiidda Janaale oo kooxo hubeysan Gurigiisa ku dileen
Kooxo hubaysan ayaa la sheegayaa inay xalay dileen Guddoomiyihii deegaanka Jiidda Janaale oo hoostagta Magaalada Marka ee xarunta Gobolka Shabeellaha hoose.
Guddoomiyihii deegaanka Jiidda Janaale oo lagu magacaabi jiray C/qaadir Ibraahin Sheikh Cali, ayaa lagu dilay gurigiisa, kadib markii kooxaha hubaysan ay ku soo weerareen aqalkiisa xilli uu halkaasi ku sugnaa.
Dilkan loo geystay Guddoomiyihii deegaanka Jiidda Janaale, ayaa waxaa Warbaahinta u xaqiijiyay C/fataax Xaaji Cabdulle oo ah Guddoomiyaha dhanka Maaliyada Maamulka Gobolka Shabeellaha hoose.
Waxa uu sheegay in rag hubaysan ay dileen C/qaadir Ibraahin Sheekh Cali, kadibna ay ka baxsadeen goobtii ay ku dileen oo aheyd aqalkiisa oo ku yaalla deegaanka Jiida Janaale.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Askar ilaalo u aheyd lala dilay Guddoomiyihii deegaanka Jiidda Janaale, inkastoo wararkaasi aanan si rasmi ah loo xaqiijin karin.
Deegaanka Jiidda Janaale waxa uu u dhaxeeya Magaalooyinka Marka iyo Janaale, wuxuu xigaa dhanka Magaalada Marka ee xarunta Gobolka Shabeellaha hoose.
Ragga dilka Guddoomiyihii Jiidda Janaale ka dambeeyay ayaa la sheegayaa in loo maleynaayo dagaalamayaal ka tirsan Ururka Al Shabaab, inkastoo Al Shabaab Baraha Internet-ka ee ay wararka ku baahiyaan ay ku sheegteen inay ka dambeeyeen dilka loo geystay Guddoomiyihii deegaanka Jiida Janaale.
Al Shabaab ayaa beegsi ku haayo qof waliba oo u shaqeeya Dowladda Federalka Somalia, waxaana ay u geystaan dilal qorsheysan.
Ciidamada xooga dalka oo la wareegay deegaano hor leh oo ka tirsan Gobolka Hiiraan
Ciidamada Amisom oo duqeyey Deegaanka Ceel Cambuulo ee Gobolka Galgaduud